Healthy Habit – Page 31 – Healthy Life Journal
ပင်ပန်းစေတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှ လွတ်မြောက်အောင် …
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အလုပ်ကို အဆက်မပြတ်လုပ်ရင်း အိပ်ငိုက်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ညောင်းညာခြင်းတွေ ခံစားရတာက ပုံမှန်ပါပဲ။ သင့်မှာ စွမ်းအင်နည်းနည်းပဲ ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ လွယ်ကူသက်သာတဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ရတာတောင် ပင်ပန်းနေစေနိုင်ပါတယ်။ ပင်ပန်းနေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ၁၀ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဟာ နာမကျန်းမှုဝေဒနာကို...
မကြာခဏ မျက်နှာသစ်တာက ကောင်းပါသလား
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— မျက်နှာခဏခဏသစ်ရင် အဆီတွေပြောင်တယ်၊ မျက်နှာပိုကြည်လင်ရှင်းသန့်တယ်လို့ထင်ပြီး တချို့လူတွေက မကြာခဏဆိုသလို မျက်နှာသစ်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ မကြာခဏ မျက်နှာသစ်တာက အရေပြားမှာ အကောင်းထက် အဆိုးကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဘာတွေဖြစ်စေနိုင်သလဲဆိုတာ ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်။ အရေပြားရဲ့ စံအဆင့်ကို ပြောင်းလဲစေပါတယ်...
နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း ဥတုသုံးပါးလုံး စွမ်းအင်အပြည့်ရှိစေမည့် သဘာဝနည်း ၁၀
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— (၁) တစ်နေ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်သောက်ပါ မနက်ခင်းမှာ ကော်ဖီမှုန့်စစ်စစ်နဲ့ ဖျော်ထားတဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်ကို သောက်တာကြောင့် စွမ်းအင်အဆင့်ကို မြင့်တက်စေပါတယ်။ ကော်ဖီခွက်ရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံခန့် ကော်ဖီမှုန့်ထည့်ပြီး ဖျော်သောက်တာကြောင့် တစ်နေ့တာ စွမ်းအင်တိုးစေမယ့် ကဖင်းဓာတ်ပမာဏကို ရရှိလန်းဆန်းစေပါတယ်။...
အလုပ်လုပ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတို့ ကျန်းမာစမတ်ကျ ကြည့်ကောင်းနေစေဖို့ . . .
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အလုပ်လုပ်သင့်ပါသလား။ လေ့လာမှုတွေအရ နဂိုကတည်းက အလုပ်လုပ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၇၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလပြီးဆုံးတဲ့အထိ အလုပ်လုပ်ရင်း ရင်သွေးလေးကို အောင်အောင်မြင်မြင် မွေးဖွားနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်း အလုပ်လုပ်သင့်သလားဆိုတာကို ဆန်းစစ်အဖြေရှာတဲ့အခါ ကျန်းမာရေးကောင်းရဲ့လား၊...
——-၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊——- Q. ကျွန်မအဘွား အသက် ၇၀ ရှိပါပြီ။ သွေးကျဲဝေဒနာလည်းရှိပါတယ်။ ကျွန်မသိချင်တာက သွေးကျဲတဲ့ဝေဒနာ ခံစားနေရသူတွေမှာ မျက်စိခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူရင် အခက်အခဲရှိပါသလား သိချင်လို့ပါ။ Nilar(FB) A. သွေးကျဲနေတော့ Platelets...
မိခင်နှင့် သမီးနှစ်ဦးပေါင်း၍ ပျော်ရွှင်စွာကခုန်ရင်း ပေါင် ၂၀ဝ နီးပါး လျှော့ချနိုင်ခဲ့
——————၊ ZKO ၊—————— ဝိတ်များနေသူတွေအနေနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျချင်တဲ့အခါ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေဆီက အားပေးမှု၊ ပံ့ပိုးမှုသာရရင် ပိုအောင်မြင်တယ်မဟုတ်လား။ ဂျေမီအယ်လီစန်နဲ့ သူ့သမီး ကယ်လီစတာတို့က ဒီလိုပါပဲ။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အားပေးထောက်ပံ့ ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေ အပြန်အလှန်ပေးတဲ့နည်းနဲ့ သူတို့နှစ်ဦးဟာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကခုန်ရင်း ၁၉၅...
အသက်ရာကျော်နေရသူတို့၏ လျှို့ဝှက်ချက် ၁၀ ခု
(၁) မိသားစု၊ မိတ်ဆွေများနှင့် နီးနီးကပ်ကပ် ခင်မင်စွာနေရခြင်း ဒီလိုနေထိုင်တာကြောင့် သက်ရှည်ကျန်းမာနိုင်ခြေ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါတယ်။ (၂) ဦးနှောက်ကို အမြဲအလုပ်ပေးခြင်း ဒီလိုနေထိုင်တာကြောင့် သက်ရှည်ကျန်းမာနိုင်ခြေ ၈၉ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါတယ်။ (၃) ရယ်မောပြီး ရယ်စရာဟာသများကိုသာ တွေးတောနေခြင်း...